Custom SPY90-SPY120 Mpanamboatra sy mpamatsy vola mitohy | Dongshen
Ao anaty vakana manta EPS dia misy ny entona mitsoka antsoina hoe pentane. Aorian'ny fangotrahana dia manomboka mivelatra ny pentane ka mitombo ihany koa ny haben'ny vakana, antsoina hoe mivelatra izany. Ny vakana manta EPS dia tsy azo ampiasaina hanamboarana sakana na vokatra fonosana mivantana, ny vakana rehetra dia mila velarina aloha vao manamboatra vokatra hafa. Ny hakitroky ny vokatra dia tapaka mandritra ny Preexpanding, ka ny fanaraha-maso ny hakitroka dia atao ao Preexpander.
Ny EPS Continuous Preexpander dia miasa mba hanitarana ny akora EPS hahatratra ny hakitroka ilaina, ny milina dia miasa amin'ny fomba mitohy na amin'ny fakana akora manta sy amin'ny famoahana ireo fitaovana nitarina. Ny EPS Continuous Pre-expander dia afaka manao fanitarana faharoa sy fahatelo hahazoana ambany hakitroka.
EPS mitohy Preexpander mitohy amin'ny Screw Conveyor, voalohany sy faharoa fanitarana loader, Expansion Chambre, Fluidized bed Drier
EPS Continuous Preexpander dia karazana milina EPS miasa amin'ny fifehezana mekanika. Ny akora EPS dia nofenoina voalohany avy amin'ny conveyor ho an'ny loader fanitarana. Eo amin'ny farany ambany ny loader dia ny visy, mba hamindrana fitaovana avy ao amin'ny loader mankany amin'ny efitrano fanitarana. Mandritra ny setroka dia mihetsika tsy tapaka ny zana-kazo mampihetsi-po mba hahatonga ny hakitroky ny fitaovana ho mitovy sy mitovy. Mifindra any amin'ny efitrano tsy tapaka ny akora, ary aorian'ny firoboroboana, miakatra hatrany hatrany ny haavon'ny fitaovana, mandra-pahatongan'ny haavon'ny materialy amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny famoahana ny seranan-tsambo fanokafana, avy eo hivoaka avy hatrany ireo fitaovana. Arakaraka ny maha avo ny fisokafan'ny, no maharitra ny fitaovana ao anaty barika, koa ambany ny hakitroky; ny ambany ny fisokafan'ny fanalefahana dia ny fohy kokoa amin'ny materialy no mijanona ao anaty barika, ka avo kokoa ny hakitroka. Ny fifehezana ny milina mitohy mialoha ny fanitarana dia tena tsotra. Na milamina ny tsindry etona na tsia dia misy fiantraikany lehibe amin'ny hakitroky ny fanitarana. Noho izany, ny milina atsika tsy mitsaha-mivelatra dia manana valiny mampihena ny tsindry japoney. Raha te hampiorina kokoa ny tsindry etona ao amin'ilay masinina dia ampiasainay ny visy mba hanomezana sakafo amin'ny hafainganana hafainganam-pandeha, ary ny setroka etona sy ny fanamiana mitovy fanamiana araka izay azo atao.
zavatra SPY90 SPY120
Efitra fanitarana savaivony Φ900mm Φ1200mm
boky 1.2m³ 2.2m³
Volume azo ampiasaina 0.8m³ 1.5m³
etona teny DN25 DN40
fihinanana 100-150kg / h 150-200kg / h
tsindry 0.6-0.8Mpa 0.6-0.8Mpa
Rivotra voafintina teny DN20 DN20
Drainage teny DN20 DN20
Famindrana 15g / 1 250kg / h 250kg / h
Andalana mampita fitaovana DN100 Φ150mm
fahefana 10kw 14.83kw
hakitroky Fanitarana voalohany 12-30g / l 14-30g / l
Fanitarana faharoa 7-12g / l 8-13g / l
Refy ankapobeny L * W * H 4700 * 2900 * 3200 (mm) 4905 * 4655 * 3250 (mm)
Lanja 1600kg 1800kg
Haavo ny efitrano ilaina 3000mm 3000mm
Teo aloha: PB2000V-PB6000V Vacuum karazana fanamboarana milina
Manaraka: DS1100-FDS1660 EPS Batch type pre expander